Akụkọ Sesie Bonsi na Martech Zone |
Edemede site na Sesie Bonsi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-atụ egwu nbudata ngwa ọzọ ka ha na-anọdụ ala maka nri abalị na ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ka Covid-19 kpalitere mkpa ịtụ ụtụ na ịkwụ ụgwọ na-enweghị kọntaktị, ike ọgwụgwụ ngwa ghọrọ akara nke abụọ. Atụnyere teknụzụ Bluetooth ka ọ kwalite azụmahịa ego ndị a site n'ikwe ka ịkwụ ụgwọ na-enweghị mmetụ aka n'ogo ogologo, na-eji ngwa ndị dị ugbu a mee ya. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya kọwara ka ọrịa ọjọọ ahụ siri mee ka nnabata nke teknụzụ ịkwụ ụgwọ dijitalụ dị ngwa ngwa. 4 n'ime 10 ndị ahịa US nwere